कि न्याय देऊ, कि मृत्यु देऊ : गंगामाया
२०७६ बैशाख ६ गते, शुक्रबार
गंगामायाको श्राप नलागोस ! , गंगामायाले न्याय कहिले पाउँछिन ?
२८ बैशाख, २०७५ || प्रकाशित ०९:३५:१०
काठमाडौ, २८ बैशाख । एउटी आमा १७ वर्षीय निर्दोष छोराको हत्यारालाई कारवाही होस् भन्ने माग राखी पाँचवर्ष देखि सत्याग्रहमा छिन् ।
गोरखा फुजेलका दम्पति नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामायाका कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको तत्कालीन माओवादीले २०६१ जेठ २४ गते चितवनमा गोली हानी हत्या गरेका थिए । आफ्नो छोराको हत्यारालाई सजायको माग गरी शुरुमा अधिकारी दम्पति दुबै आमरण अनसनमा बसे ।
अनसनसहतिको सत्याग्रहको ३३४ औं दिन २०७१ असोज ६ गते वीर अस्पतालमा नन्दप्रसादको मृत्यु भयो । नन्दप्रसादको लास अहिले पनि शिक्षण अस्पतालमा रहेको छ । भाइको हत्यारालाई सजाय नभएसम्म अधिकारीका जेठा छोराले आफ्नो बाबुको लास नबुझ्ने अडान लिएको बताइन्छ ।
श्रीमान्को मृत्युपछि पनि गंगामायाले आफ्नो न्यायिक मागलाई यथावत राख्दै सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिँदै आएकी छन् । उनलाई राज्यप्रशासनले उठाएर वीर हस्पिटलको क्याविन ७ मा राखेको छ ।
तपाईको खास माग के हो ? उनको बारेमा बुझ्न पुगेको सञ्चारकर्मीसँग गंगामायाले भनिन् ‘मेरो माग भनेको त छोराको हत्यारालाई सजाय भई देशमा न्यायिक राज्य छ भन्ने कुराको सबै नागरिकलाई प्रत्याभूति होस् भन्ने हो ।
तर यो अपराधि राजनीतिक क्षेत्रले अदालतले गरेको फैसलालाई पनि कार्यान्वयन हुन दिएन, अब मलाई कि न्याय देऊ कि मृत्यु देऊ भन्ने हो’ । पहिला न्याय नपाए गोरखा जानु भनिन्थ्यो तर यतिबेला गोरखाकै गंगामायाले न्याय नपाएर वीर अस्पतालको क्याबिनमा मृत्यु कुर्न बाध्य भइरहेकी छन् ।
From : Journal Group Of Nepal
#पूजा पासवान #डा. सिके राउत #कान्छो मेयर
पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भने,- 'काँग्रेसीलाई उखेलेर फालौं'
मिर्चैयाको टाईम्स स्कूल १३औं वर्षमा प्रवेश, शिक्षा अधिकारीले भने, 'क्वालिटी असाध्यै राम्रो'